देश माफियाको चंगुलमा, मुक्ति पाउन कठिन
केदार सुवेदी / काठमाडौं ।
उनले करका दर हेरफेर गरेको र त्यसका लागि अनधिकृत व्यक्तिलाई अनधिकृतरूपमा काम लगाइएको कसुरबारे जस्तो सत्यतथ्य विवरण माग भएको थियो उल्लेखित जवाफले पुष्टि हुनेकुरा थिएन र भएन पनि । यससम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले छानबिनको माग गरे । त्यस्तो छानबिन नहुँदा एमाले सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको उपस्थितिलाई नै बहिष्कार गरे ।
देशकै बजेट माफियाको चंगुलमा कसरी पुगिसकेको रहेछ र त्यसबाट उम्कन सजिलो छैन भन्ने यतिविवरणले पनि बताउँछ । मन्त्री शर्माले के के गरको थिए भन्ने विवरण राख्नु पहिले आजको दिन बजेटमा यस्तो विरोध गरिरहेको अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षीदल सत्तारुढ हुँदा के गरेको थियो भन्ने विवरण हेरियो भने अझै डरलाग्दो चित्र प्रकट हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेले त्यस्तो छानबिन नभएसम्म यी अर्थ मन्त्री र उनको बजेट बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसमा प्रतिपक्षीदलका नेता तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माओली स्वयम विज्ञका रूपमा प्रतिक्रिया दिन उत्रिए । उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले गरेको करका दर तोकिने यस्तो काम व्यापारीसँग मिलेर, कमिसन खाएर मात्र सम्भव हुन्छ । एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम (असार २) मा उनले भने –
‘व्यापारीसँग मिलेर करको दर तोकिन्छ, कमिसन खाएर करको दर तोकिन्छ, यस्तो त कुनै राज्य, कुनै प्रणालीमा पनि कल्पना गर्न सकिँदैन, यो पञ्चायत कालमा पनि हुँदैनथ्यो । कहीं पनि हुँदैन । बजेट संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ गरिने र त्यहाँ पनि करका दर नभई बजेटको समग्र ब्रिफिङ गरिने प्रचलन छ । त्यहाँ रहेका मन्त्रीले करका दर र बजेटबारे सूचना चुहाउलान् भनेर प्रधानमन्त्रीसँगै संसद् जाने गरिन्छ । यो गोप्य छ, कतै खुल्दैन भनेर संसद्‌मा मात्रै बजेटको ब्रिफकेस खोलिन्छ है भनेर त्यसरी रिबनले बाँधेर, गोप्य बनाएर लगेर अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भनेपछि रोष्ट्रममा गएर मात्रै खोलिन्छ, बजेट प्रस्तुत गरिन्छ, यहाँ त बनाउँदै गर्दा व्यापारिका प्रतिनिधि राखेर बनाइन्छ । बनाउनु पहिला कमिसन खाएर बनाइन्छ भने के हालत भयो देशको ।’
उनले भने जस्तो उनको कार्यकालको बजेट पनि कुनै व्यवसायीलाई उच्चस्तरको सबैले बुझ्ने किसिसमको ‘लाभ–हानी’ पुर्‍याउने कामबाट नै प्रेरित रह्यो । अर्थमन्त्री नभएका बेला उनी आफैंपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत करका दर हेरफेरमा सरिक भए ।
ओली नेतृत्वकोे दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट माफियासँगको मिलोमतोको उदाहरण मानिएको थियो । त्यसबेला पनि विद्युतीय सवारी साधनमा चालु वर्ष ०७९–८० को जस्तै चर्को कर लगाइयो र विद्युतीय सवारी साधनलाई अत्यधिक महँगो बनाइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए ठीक अहिलेका अर्थ मन्त्री शर्माले जस्तै गरी । त्यसबेला खतिवडाको भनाइ थियो–
‘पेट्रोल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात घटाउने भनेर विद्युतीय सवारीमा दिएको सुविधामा महँगा–महँगा गाडीहरू आइरहने अवस्था विवेकपूर्ण देखिएन, व्यापार घाटाका हिसाबले पनि यस्तो असीमित सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाएका हौं ।’
बिजुलीका गाडीमात्र होइन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा ०७७–७८ मा प्रस्तुत बजेटले अघिल्लो वर्ष कायम रहेको चकलेटको भन्सारदर ४० बाट घटाएर ३० प्रतिशतमा झारेको थियो भने केटाकेटीलाई खुवाउने दूधमा भने २० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो । त्यो बजेटले गरेको यो व्यवस्था अनुसार पूरै एकवर्ष यसरी नै चल्यो ।
चकलेटको भन्सारदर घटाएको केटाकेटीलाई खुवाउने दूधमा भन्सार लगाएको कुरा सत्य भएर पनि पत्याई नसक्नुकै थियो तर त्यो वर्षभरि सच्याइएन । बल्ल अर्को वर्षको बजेटमा त्यसलाई सच्याइयो । जसले भन्सार बढाएको थियो त्यही सरकारले पछिल्लो वर्ष दूधमा २० प्रतिशत घटाएर २० मा र चकलेटमा १० प्रतिशत बढाए ४० प्रतिशत पुर्‍यायो ।
अघिललो वर्ष चकलेटको पनि एउटा ब्राण्डलाई मात्रै लागु हुने गरी भन्सार दर घटाइएको थियो त्यसको अघिल्लो वर्ष अर्थात् तिनै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा भने यो दर एउटै थियो । दर फेरबदल भएको ठाउँ यही हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कोकोआ चकलेटको दर घटाएर ३० प्रतिशतमा झारेका थिए । त्यसबेला यस्तो चकलेटको आयात उनका निकट व्यवसायीका हातमा रहेको भन्ने विवरण आएका थिए । पछिल्लो वर्ष त्यही दलका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त करको दर उल्टाइदिएका हुन् । यो ठाउँमा फेरी प्रश्न – एउटै सरकारका दुई अर्थमन्त्री, मध्ये यी दुई विषयमा यस प्रकारको भिन्नताको कारण के थियो ? एमालेबाट उत्तर आउन बाँकी छ ।
यो बजेट घोषणा भएको केही दिन अघिमात्रै यो समूहले धेरै नै ठूलो संख्याको विजुलीगाडीहरू भित्र्याएको थियो । त्यसैमा पर्छ आयातित चकलेटमा लाग्दै आएको कर घटाइदिएका कुरा पनि । विशेषगरी यी दुई विषयमा संसद्‌मा त्यसबेला चर्को आवाज उठ्यो। सांसदहरूले प्रश्न गरे । नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीहरूले प्रस्टीकरण माग गरे । सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले समेत खतिवडाको जवाफ माग भयो उनले यी दुई करको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । न त उनले बिजुलीबाट चल्ने सवारीमा लगाएको करको औचित्य नै पुष्टि गरे । अवस्था अर्थमन्त्री शर्माकै जस्तो थियो । दर हेरफेरका विषयमा संसद्‌मा प्रश्न उठे तर अर्थमन्त्रीको उत्तर तर्कसंगत थिएन ।
यसमा अचम्म के भयो भने चर्चित विशाल ग्रुपकै दबाबमा तयारी मदिरा आयात रोकेको सरकारले यसकै कै दबाबमा खुला गरिदियो । सरकारले मदिरा आयातमा २०७६ चैत ११ गते बन्देज लगाएसँगै स्वदेशी उद्योगीहरूले आफ्नो उत्पादनमा लगानी वृद्धि गरिरहेका थिए तर २०७७ असोज २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मदिरा आयात खुला गर्ने निर्णय गरिदियो ।
११ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शोधानान्तरमा असर गर्न सक्ने भन्दै तयारी मदिरामा रोक लगाएको थियो । कोरोनाले यस्तो सञ्चिति घटेको भनिएको थियो । तर वास्तविक कारण चाहिँ एउटा समूहलाई अधिकाधिक लाभ पुर्‍याउनुनै थियो भन्ने विवरणहरू त्यसैबेला सार्वजनिक भैरहेका थिए । यो विषयमा विज्ञहरूले नै भने ‘चैतमा रक्सीको व्यापारमा जमेको घराना विशाल ग्रुपसँग स्टक बढेको थियो रोकियो, अहिले स्टक सकियो खुला गरियो ।’
उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले विशाल ग्रुप त कहिले ओम्नीको चर्चा सुन्ने गरेको बताए। ‘कहिले विशाल ग्रुप भन्ने । कहिले ओम्नी, कहिले कसको चर्चा गर्‍या त सुन्छु। मैले पटक–पटक भन्ने गरेको छु, जथाभावी नै बोल्ने हो भने बेग्लै कुरा भो। जसलाई मुख छाडे पनि सन्तोष हुन्छ भने बेग्लै कुरा भो, नत्र भने कहिले कोबाट सञ्चालित छ ओम्नी ग्रुप बोलेको छ। कहिले के भनेर बोलेको छ। कहिले विशाल ग्रुपको साँठगाँठबाट भन्ने गरेको छ। यस्तो कुरा हामी सांसदजस्तो जनप्रतिनिधिले बोल्दा तथ्य प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्छ। बेठीक कुरा सैह्य हुन्न। अनियमित र भ्रष्ट कुरा यो सरकारले सुन्दैन।’
अमेरिकामा सम्पन्न रिलेभेन्ट होम केयर आठौं अन्तर स्टेट क्रिकेटको उपाधि एभरेष्ट कोलोम्बसलाई दश करोड मानिस आफ्नो घर छोड्न बाध्य